Samsung Internet Browser 9.4.00.45 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 9.4.00.45 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ဆက္သြယ္ေရး Samsung Internet Browser
Samsung Internet Browser ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
To scanaQR code, tap the QR code icon that appears when you tap the address bar.
By long-pressing on back or forward button at bottom bar, you can easily launchapopup with the full history of the current tab, and click one of them to move the specific web page.
* Easy to see your notifications
We provide collection of notifications you've gotten from web pages at 'Notifications' menu in Settings, so that you can easily check notifications in one place.
* Save All Images
All images fromaweb page can be saved at once.
The URL bar showsabutton for allowing quick access to Reader Mode. Also an Add To Homescreen button which allows installation of web apps inasingle tap.
Download files faster with our new optimized, parallel download system, with availability of pause, resume and cancel download.
High Contrast Mode can be enabled in the settings of Samsung Internet, for those who require increased contrast to view webpages more comfortably like visually impaired.
* Samsung Internet in Share panel
When you want to openaurl or searchakeyword which presents on android app, you can simply select it and click share menu, then you can find Samsung Internet in Share panel.
* You can use biometric authentication for website logins, web payments and accessing Secret Mode, on supported Samsung devices.
We are using Chromium 67 as the browser engine.
Android အတွက် Samsung ရဲ့အမြန်ဆုံး, smoothest, လုံခြုံဆုံး web browser ကိုနှင့်အတူသင့် web browsing ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းခံစားရသည်။
လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး
ထောက်လှမ်းရေး Cross-site ကိုခြေရာခံနိုင်စွမ်းနှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသိုလှောင်မှု (cookie ကို) access ကိုရှိသည်သော domains များခွဲခြားသတ်မှတ်။
သင်သည်သင်၏ data တွေကိုခိုးယူဖို့ကြိုးစားရသောက်ဘ်ဆိုဒ်များကိုသွားရောက်လည်ပတ်ထံမှသင်တို့ကာကွယ်တားဆီးဖို့လူသိများအန္တရာယ်ရှိတဲ့က်ဘ်ဆိုက်များကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်မတိုင်မီငါတို့သည်သင်တို့သတိပေးပါလိမ့်မယ်။
* အကြောင်းအရာ blocker
Android အတွက် Samsung ကအင်တာနက်ကိုဘေးကင်းနှင့်ပိုပြီး် browsing အောင်, အကြောင်းအရာပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် filter များပေး 3rd ပါတီ app များကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
* ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကို
တစ်ဦး QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးစေရန်, သင်ကလိပ်စာဘားကိုထိပုတ်ပါသည့်အခါပေါ်လာဖို့အတွက် QR code ကို icon ကိုထိပုတ်ပါ။
* သမိုင်း Navigation
အောက်ခြေဘားမှာနောက်ကျောသို့မဟုတ်ရှေ့ဆက်ခလုတ်ကိုရှည်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်အလွယ်တကူလက်ရှိ tab ကိုအပြည့်အဝသမိုင်းနှင့်အတူပေါ့ပ်အပ်ကိုဖွင့်ပြီးလျှင်, တိကျတဲ့ဝဘ်စာမျက်နှာရွှေ့ဖို့သူတို့ထဲကတဦးတည်းကို click နိုင်ပါတယ်။
အကြှနျုပျတို့သညျကိုအလွယ်တကူတစ်နေရာတည်းတွင်အကြောင်းကြားစာများစစျဆေးနိုငျသို့မှသာသင်သည်ချိန်ညှိချက်များတွင် 'အသိပေးချက်များ' 'menu ကိုမှာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေဆည်းပူးင့်အကြောင်းကြားစာများ၏စုစည်းပေးထားပါသည်။
* အားလုံး Images ကို Save
စာဖတ်သူမုဒ်ကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အငြိမ့်ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အခုဆိုရင်သင်ဖောင်, စာလုံးအရွယ်အစားနှင့်နောက်ခံရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်စာဖတ်သူမုဒ်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
* URL ကိုဘား
URL bar မှာစာဖတ်သူမုဒ်မှအမြန် access ကိုခွင့်ပြုဘို့ခလုတ်တစ်ခုပြသထားတယ်။ ဒါ့အပြင်တစ်ခုတစ်ခုတည်းကိုထိပုတ်ပါအတွက်ကို web app များကိုတပ်ဆင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ပင်မမျက်နှာပြင်ခလုတ်ကိုရန်ထည့်ပါ။
ဖိုင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အ optimized, အပြိုင် download, စနစ်ဖြင့်ပိုမြန် Download, ခေတ္တနား၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူ, download, ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် cancel ။
* Tab ကိုပွတ်ဆွဲ
ပွတ်ဆွဲသင်၏နောက် / ယခင် tab ကိုမှသွားလာရန်, URL ကိုဘားသို့မဟုတ်အောက်ခြေ toolbar ကို၌ကနျြသို့မဟုတ်ညာဘက်။
* High Contrast Mode ကို
High Contrast Mode ကိုအမြင်အာရုံချို့ယွင်းတူသောပိုပြီးအငြိမ့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကြည့်ရှုရန်တိုးလာဆနျ့ကငျြဘလိုအပ်သူများအတွက် Samsung ကအင်တာနက်ကို၏ setting တွင်ဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
Samsung ကအင်တာနက်ကိုသင့်ရဲ့နေ့စဉ် browsing အတွက်ပိုပြီးအဆင်ပြေစေ features တွေထောက်ခံပါတယ်။
ဝေမျှမယ် panel ကအတွက် * Samsung ကအင်တာနက်ကို
သင်တစ်ဦး url ကိုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ် android app ကိုအပေါ်တင်ဆက်သော keyword ကိုရှာဖွေချင်တဲ့အခါ, သငျသညျရိုးရိုးကကို select နှင့်ရှယ်ယာ menu ကို click နှိပ်နိုင်ပါသည်, ထိုအခါသင်ဝေမျှမယ် panel ကိုအတွက် Samsung ကအင်တာနက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အမေဇုံစျေးဝယ်လက်ထောက်အမေဇုံနှင့်အတူထုတ်ကုန်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့် web ပေါ်မှာစျေးဝယ်သည့်အခါအကောင်းဆုံးအပေးအယူ get ရန်သင့်အားဖွင့်ဖို့ကိုဖွင့်နိုင်ပါသည်။
Samsung က devices များ နှင့် သာ. ကောင်း၏ဘက်ပေါင်းစုံ
Samsung ကအင်တာနက်ကိုအမျိုးမျိုးသောကို Samsung Device များအကြားတစ်ဦးတသမတ်တည်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပေးရည်ရွယ်သည်။
* သင်, က်ဘ်ဆိုဒ်ရဲ့ login များအတွက် biometric စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းကိုအသုံးပြုဖို့ကို web ငွေပေးချေမှုနှင့်ထောက်ခံ Samsung က devices များပေါ်တွင်လျှို့ဝှက် Mode ကိုရယူသုံးလို့ရပါတယ်။
သင်တစ်ဦးကို web page ကိုကြည့်ရှုနေကြသည်ကြောင့်စွဲငြိဖွယ်ရာ virtual reality အတွက်ဖွင့်လှစ်မည်သည့်အခါ * တစ်ဂီယာ VR နားကြပ်သို့ဖုန်းကိုချထားပါ။
* Samsung က DeX နှင့်အတူ desktop ကိုကြည့်ရှုခြင်းအဘို့အ Optimized ။
* စမတ် Switch ကို အသုံးပြု. (တစ်ဦးချင်းစီ device ကိုဗားရှင်း 8.2+ ရှိပါတယ်ဘယ်မှာ) ကိရိယာများကိုဖြတ်ပြီးလျင်မြန်စွာ Access ကိုပစ္စည်းများကိုလွှဲပြောင်းပါ။
ကျနော်တို့ကို browser အင်ဂျင်အဖြစ်ခရိုမီယမ် 67 ကို အသုံးပြု. ရသည်။
အောက်ပါခွင့်ပြုချက် app ကိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လိုအပ်သည်။
optional ကိုခွင့်ပြုချက်အဘို့, ဝန်ဆောင်မှုက default လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖွင်, ဒါပေမယ့်ခွင့်ပြုမထားပေ။
တယ်လီဖုန်း: app ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသတင်းအချက်အလက်အတွက်ကိရိယာ-ထူးခြားတဲ့မှတ်ပုံတင်သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးအသုံးပြုထားတဲ့
တည်နေရာ: အသုံးပြုမှုအတွက်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာအားဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်တည်နေရာသတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံတည်နေရာ-based အကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြု
ကင်မရာ: ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပစ်ခတ်မှု function ကိုနှင့် QR ကုဒ်ကိုပစ်ခတ်မှု function ကိုပေးအသုံးပြု
မိုက်ခရိုဖုန်း: ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အသံဖမ်း function ကိုပေးအသုံးပြု
ဆက်သွယ်ရန်: မိုဃ်းတိမ်သည်ထပ်တူပြုခြင်းများအတွက် device ကိုအကောင့်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အသုံးပြု
သင်၏ system software ကိုဗားရှင်းအန်းဒရွိုက် 6.0 ထက်နိမ့်သည်မှန်လျှင်, App ကိုခွင့်ပြုချက် configure လုပ်ဖို့ဆော့ဖ်ဝဲကို update လုပ်ပါ။
ယခင်ကခွင့်ပြုခဲ့ခွင့်ပြုချက်ဆော့ဖ်ဝဲကို update ကိုအပြီးစက်ကိုချိန်ညှိမှုများအတွက် Apps ကပ menu ပေါ်တွင် reset နိုင်ပါသည်။
Samsung Internet Browser အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Samsung Internet Browser အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Samsung Internet Browser အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Samsung Internet Browser အား အခ်က္ျပပါ
theonaapp စတိုး 10 4.35k
Samsung Internet Browser ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Samsung Internet Browser အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 9.4.00.45
ထုတ်လုပ်သူ Samsung Electronics Co.,Ltd.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.samsung.com/us/common/privacy.html
File Size: 68.69MB
Release date: 2019-07-31 22:21:55
Samsung Internet Browser APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ